Hentitra ny kaominina Araha-maso akaiky ny fanalana ny fako eto an-drenivohitra
Taorian’ny fidinana ifotony nataon’ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana ny alatsinainy 19 novambra lasa teo nijery ireo fako misavovona teny Alarobia ,
Vasakaosy tsenan’ny atody, Anosivavaka ary Ankadifotsy dia tsy niandry ela ny fiadidian’ny tanànan’Antananarivo fa avy hatrany dia nanamafy ny fanampiana ny SAMVA amin’ny fandraofana ny fako. Tsy azo atao sorona ny vahoakan’Antananarivo sy ny tanàna, hoy ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana na dia tsy mandray ny andraikiny aza ny SAMVA. Nanomboka nanadio izy ireo omaly alakamisy 22 oktobra niaraka tamin’ireo fiarabe fanomezana avy amin’ny kaominina sy ireo malalatanana hafa. Teny Andohatapenaka no nanombohany ny asa. Manome toky ny eo anivon’ny tanànan’Antananarivo fa afaka andro maromaro dia hisy vokany ny asa fanomezan-tanana ny SAMVA mba hampadio ny tanàna . Manainga ny mponina mba hanaja ny ora fanariana ny fako eny amin’ny dabam-pako hatrany izy ireo. Manomboka amin’ny 5 ora hariva ka hatramin’ny 8 ora alina izy io, araka ny fanazavan’ny lefitra voalohan’ny ben’ny tanàna Olivier Randrianarisoa ka tsy tokony hohadinoina. Tsiahivina fa anisan’ny manaparitaka ny aretina ny fivangongoan’ny fako etsy sy eroa, antony tena mahasarotiny mafy ny kaominina.